Body reraky Camera
Short Description: polisy fakan-tsary docking fiantsonana no farany indrindra sy ny tahirin-kevitra fa mamaly ny fitaovana fanatsofohanao sary, izay afaka mifandray hatramin'ny 8 fakan-tsary, amin'ny alalan'ny USB3.0 seranan-tsambo, mifanaraka indrindra amin'ny fakan-tsary vatana polisy ao an-tsena. Product Tags: Maximum Quantity ny Supported Units: 8PCS Features: - All-rafitra vy, dia mateza sy mafy; - mifanaraka amin'ny USB2.0 tanteraka sy USB3.0, manohana mafana-swappable. - Amin'ny lafiny roa fiarovana ny Output, afaka miaro ny fitaovana mifandray amin'ny overloading, fanohanana ...
polisy fakan-tsary docking fiantsonana no farany indrindra sy ny tahirin-kevitra fa mamaly ny fitaovana fanatsofohanao sary, izay afaka mifandray hatramin'ny 8 fakan-tsary, amin'ny alalan'ny USB3.0 seranan-tsambo, mifanaraka indrindra amin'ny fakan-tsary vatana polisy ao an-tsena.
Maximum Quantity ny Supported Units: 8PCS
- All-rafitra vy, dia mateza sy mafy;
- mifanaraka amin'ny USB2.0 tanteraka sy USB3.0, manohana mafana-swappable.
- Amin'ny lafiny roa fiarovana ny Output, afaka miaro ny fitaovana mifandray amin'ny overloading, manohana be loatra instantaneous malefaka sy fiarovana amin'izao fotoana izao; seranana tsirairay dia manome hatramin'ny 2.0A amin'izao fotoana izao.
- Ny Dock afaka hitandrina 8 pcs fakan-tsary sy 8 pcs vatoaratra tamin'izany andro izany.
- Mifandray amin'ny vy contactor.
- Docking manana fisaka sy mivelatra efatra azo stably napetraka tamin'ny rehetra ambonin'ny fisaka.
- Nitondra ny jiro, izay azo mivantana hamono valo USB fahefana.
Anarana Polisy Body Camera Docking Station
asa Multi-vondrona fanatsofohanao sary sy mamaly ny tahirin-kevitra
Maximum Quantity ny Supported Units 8PCS
Seranan-tsambo tsirairay dia manome malefaka 5V
Seranan-tsambo tsirairay dia manome ambony indrindra amin'izao fotoana izao 2.0A, adaptive araka ny fitaovana mifandray
Maximum fahan'ny Power 120W
Lanja afa-karatsaka 4KG
Previous: DMT1-Polisy Camera
Next: DMT7-Polisy Camera
Power Bank fa mamaly ny Station
Sata Hdd Docking Station mpamily
Universal Docking Station Fa Laptop
Wireless Charger Docking Station
Office Ora: MF 9 am-6pm
Hisambotra porofo, hitondra ny rariny ho an'ny andaniny sy ny ankilany, miteraka azo antoka kokoa izao tontolo izao. Ny fanalahidin'ny fiarovana eo an-tananareo Rehefa nanao safidy ny manao ny Diamante fakan-tsary.
CONTACT DIAMANTE TO & bebe kokoa INFO.